Weedhsan - Gorfaynta Buugga 'Geeddigii Cabdiqays'
Gorfaynta Buugga 'Geeddigii Cabdiqays'
Dhowaan waxa magaalada Hargeysa lagu soo bandhigay diiwaanka la magacbaxay ‘Geeddigii Cabdiqays’ oo uu qoray Cali Maxamed Yuusuf “Caligurey”. Qormadani waa gorfayn guudmar ah oo ku saabsan
buuggan iyo waxyaabaha uu la wadaago ama aanu la wadaagin buugga 'Darmaan iyo Dalxiis' ee uu hore abwaanka uga qoray Maxamed Cismaan Muxumed "Ugaaska".
Cali Maxamed Yuusuf “Caligurey” oo ah halgamaa muddo dheer ku soo jiray siyaasadda Soomaalilaand, waxa aan ugu horrayn ku hanbalyaynayaa dedaalka xooggan ee uu sameeyay si uu u soo saaro buuggiisii curad. Waxa aan rejaynayaa in khaladaadka diiwaankiisan ka soo muuqday uu uga faa’iidaysan doono si togan.
Buuggan waxa loo daabacay si cuddoon, iyada oo lagu daabacay warqado cusuus ah oo indhaha u roon iyo jeldi nashqad ahaan soojiidasho leh. Waxa uu xanbaarsan yahay 144 tixood, kuwaas oo 135 ka mid ah uu Cabdiqays leeyahay, halka 9ka soo hadhay ay kala leeyihiin: Hadraawi (7), Gaarriye (1) iyo Siciid Saalax (1). Sagaalkan tixood waa kuwo qoruhu ugu maarmi waayay si uu u xoojiyo fahamka akhristaha, maadaama ay ahaayeen tixo ay abwaan Cabdiqays isdhaafsadeen, isuguna jawaabeen saaxiibbadiisaa kale.
Buugga Darmaan iyo Dalxiis ee uu qoray Maxamed Cismaan Muxumed "Ugaaska", walow ay muuqato in waqti la galiyay, haddana waxa uu tix kasta ka horraysiinayaa hadaltiro badan oo aan akhristaha wax xog ah ku biirinayn. Waxa kale oo aad dareemaysaa in qoruhu aqoon xaddidan u leeyahay habdhiska iyo miisaanka maansada Soomaaliga. Waxa aad arkaysaa isaga oo tix kasta (bad kasta oo ay tahayba) ku sheegaya ‘heello’, iyada oo aanay jirin mid qudha oo ‘heello’ ahi. Waxa kale oo ay arrintani ka muuqataa sida uu u qoray tixaha buugga ku qoran, kuwaas oo intooda ugu badan laaxin ku jiro. Fahamdarrada qaabqoraalka maansadu waa iinta ugu weyn ee ka muuqata buugga Darmaan iyo Dalxiis, isla markaasna nuxurtirtay. Waxa aan Caligurey ku ammaanayaa in tixaha iyo heesaha buugga uu u qoray si aad uga wanaagsan sidii buuggaas hore.
© Qalinleyda Weedhsan